ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ
ကျွန်မကို အားပေးနေကြသော မိတ်ဆွေများနှင့် ပို့စ်အသစ်ကို စောင့်နေသူများကို လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ်။ ကျွန်မ နိုဝင်ဘာလမှာ Final Exam ရှိတဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် အများကြီးအလုပ်ရှုပ်နေတာကြောင့် တစ်ပါတ်တစ်ခါ သို့မဟုတ် နှစ်ခါလောက်ပဲ စာရေးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာရှေ့ရောက်တာနဲ့ ၀ါသနာအရ လက်ချောင်းတွေက သိပ်တားမရတာနဲ့ အားလုံးကို အဆက်ဖြတ်ထားရပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကျွန်မ ခံစားရတဲ့ ကဗျာတစ်ချို့ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ စကားမစပ် ကျွန်မကို အကြောင်းမရှိ မိုက်ရိုင်းစွာပြောဆိုနေသူများအားလုံး မေတ္တာကြောင့် ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး ပိုပြီးပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့နေပါတယ်လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ သတ္တိရှိတယ်ဆိုရင်တော့ နာမည်မှန်နဲ့ပြောကြေးပေါ့နော်။
ပါဝင်ဆင်နွှဲကြစို့ ………….. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:01 PM
wow, very powerfull... keep it up
This poem is very perfect by making and quoting of the leaders' saying for People in Burma for encouragement. Keep fighting with your pen against brutal SPDC. One word can change the government!!! Keep fighting like this for the people of Burma!!